Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Warbaahinta Bulsheed miyuu ku leeyahay Xisaab-isweydaarsigan? | Martech Zone
Kani waa macluumaad kale oo weyn oo ka socda CJG Digital Marketing, 10 Isbeddellada Suuqgeynta ee Warbaahinta Bulshada si loo Daawado sanadkan 2015. Waa muhiim in dib loo eego waxyaabaha aad ka kooban tahay, istiraatiijiyad bulsheed iyo kuwa guurguura si loo ogaado meesha laga yaabo inaad waxoogaa ka dhimman tahay.
10 Isbeddellada Suuqgeynta ee Warbaahinta Bulshada si loo Daawado sanadkan 2015
Content Suuq sii wado inuu helo bulsho badan.
Real Time Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada waxay noqon doontaa erey-bixin.
Cod iyo Muuqaal xukumi doona waxyaabaha bulshada.
Waxaa jira isbeddel sii socda, oo joogto ah oo dhanka warbaahinta bulshada ee wareega.
Xayeysiinta Warbaahinta Bulshada oo lacag la siiyay sii socon doono.
Astaamaha lacag bixinta adoo adeegsanaya Boorsooyinka Warbaahinta Bulshada waxay u socdaan guud ahaan.
Kacsanaanta Ganacsiga Warbaahinta Bulshada sii socota.
Falanqaynta Warbaahinta Bulshada isbeddelayaa, oo awood u siinaya suuq-geynta warbaahinta bulshada ee caqliga badan.
Baraha Bulshada iyo Suuqa B2B ballaadhinaya.
Kacsanaanta Shabakado Bulsho Oo Cusub.
Infographic wuxuu tilmaamayaa in arimaha asturnaanta iyo xayeysiintu ay sii wadaan inay ka careysiiyaan dadka isticmaala oo laga yaabo inay albaabka u furaan shabakado badan oo niche ah… sidaas ayaan rajeynayaa! In kasta oo aan maalin kasta adeegsado Facebook, waxaan jeclaan lahaa inay jiraan dad kale oo kula tartama goobta warbaahinta bulshada.
In badan oo ka mid ah 97% suuqleyda ayaa adeegsada warbaahinta bulshada, iyadoo ilaa 92% ay qirayaan muhiimadda qalabkani u leeyahay ganacsiyadooda. Waxyaabaha soo socdaa waxay bixiyaan dulmar guud ee isbeddellada cusub, waxyaabaha muhiimka ah iyo waxyaabaha aad u baahan tahay inaad iska ilaaliso sannadka dambe si aad naftaada iyo ganacsigaagaba ugu diyaarin karto waxa ku kaydsan warbaahinta bulshada sannadka 2015. Jomer Gregorio, CJG Digital Marketing
Tags: 2015b2bbuzzwordContent SuuqHelloFacebookInstagramLinkedInwarbaahinta bulshada ee wareegashabakadaha cusub ee bulshadatirada sawirada ee snapchattirada farriimaha ee facebooktirada dadka isticmaala baraha bulshadatirada soo rarka ee tumblrbixisay baraha bulshadaPinterestgaarka ahwaqtiga dhabta ah warbaahinta bulshadacodka bulshadaganacsiga bulshadasuuqgeynta waxyaabaha bulshadaxogta bulshadaururinta xogta bulshadasuuq-geynta suuqawarbaahinta bulshadaxayaysiinta warbaahinta bulshadafalanqaynta warbaahinta bulshadabuzzword warbaahinta bulshadaganacsiga warbaahinta bulshadaistiraatiijiyadda suuq geynta warbaahinta bulshadalacag bixinta warbaahinta bulshadaasturnaanta warbaahinta bulshadaistiraatiijiyadda warbaahinta bulshadaisbeddellada warbaahinta bulshadaboorsooyinka warbaahinta bulshadafiidiyowga bulshadatumblrsaacadood toddobaadle ahwaqtiga usbuuclaha ah ee warbaahinta bulshadawaa yaab
PollSnack: Abuur Fududeyn, Codbixinno Habeyn ah oo Facebook ah